Ukuthengiswa kweMacBook kukhule ngama-94% kwikota yokuqala yalo nyaka | Ngivela kwa-mac
UToni Cortes | 14/05/2021 16:00 | Izaziso
Kwikota yokuqala yalo nyaka i-Apple ithengise cishe 6 million MacBooks. Izibalo ziyizilinganiso, ngoba inkampani ayivamisile ukunikeza ulwazi oluningi ngokuthengiswa kwayo, yize kuyizibalo zokuziqhayisa ngazo.
Impela inkathi entsha yama-Macs I-Apple Silicon Kube yimpumelelo enkampanini. Ukubheja okuyingozi nge-Apple, esikhathini sobhadane lomhlaba wonke, kepha ngaphandle kokungabaza okulungile. Futhi manje, iMac yokuqala nayo ivela ngeprosesa ye-M1. Izikhathi ezinhle ze-Apple, ngokungangabazeki.
I-Apple ithengise isilinganiso Izigidi ezingu-5,7 we-MacBooks kwikota yokuqala ka-2021, ngokususelwa ekulinganisweni okusha okushicilelwe kwe-laptop okuthengiswa namuhla nge-Strategy Analytics.
Izibalo zifaka ukuthengiswa kwamamodeli MacBook Pro y MacBook Air, ngaphandle kwe-Mac mini, Mac Pro, ne-iMac. Lokho wukuthi, ama-laptops enkampani kuphela.
I-Apple ibingumkhiqizi wesine ngobukhulu emhlabeni jikelele, elandela uDell, i-HP neLenovo, nezinkampani ezintathu ezithumela phakathi kwama-laptops ayizigidi eziyishumi kuya kwezi-10 ngekota yokuqala ka-16.
Ama-laptops ayizigidi ezingu-5,7 athengiswe yi-Apple anyuke ngamaphesenti angama-94 uma kuqhathaniswa ne-2,9 million eyakhokhisa ikota elingaphambili lonyaka. Konke lokhu kubonga ukukhula okuqinile okuvela ekufuneni okuqhubekayo kubasebenzisi abasebenza noma abafunda ekhaya ngenxa yobhadane, nokwamukelwa okuhle kwabasebenzisi bama-Macs amasha nge-processor. M1.
Isabelo semakethe sika-Apple sekota besingamaphesenti angu-8.4, uma kuqhathaniswa namaphesenti angu-7.8 ngonyaka odlule. Lenovo y HP bayaqhubeka nokuba ngabaholi bezimakethe, bethengisa izinhlobo ezahlukene zamalaptop ezisebenzisa iWindows eceleni kwama-Chromebook, ngokukhula okuqinile emkhakheni wezemfundo, ikakhulukazi ngenxa yentengo yazo.
Ukuthengisa okuhle kubonga ku-M1
Ama-MacBooks amasha alindele ukukhishwa kungekudala.
Ukuthengiswa okuphelele kwama-laptop kukhuphuke ngamaphesenti angama-81 unyaka nonyaka phakathi kwabo bonke abathengisi abakhulu. Apple Ikakhulu, kungenzeka ukuthi ibone ukukhula okukhulu, ngenxa yokwethulwa kukaNovemba iMacBook Pro M1 ne-MacBook Air eyi-13 intshi.
I-Apple kungenzeka igcine ukukhula kwayo kokuthengiswa kwe-PC njengoba ilungiselela ukwethula amamodeli amasha we-Apple Silicon ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka. Amahemuhemu asikisela ukuthi kunezinhlobo ezibuyekeziwe ze- 16-intshi iMacBook Pro ilungele ukwethulwa, kanye a iMac M1 kukhulu kune-intshi engu-24 yamanje. Abakwa-Apple kulindeleke ukuthi bethule iMacBook Air entsha neMacBook Pro entsha, kepha kungenzeka bangafiki kuze kufike u-2022.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Ukuthengiswa kweMacBook kukhule ngama-94% kwikota yokuqala yalo nyaka